Lisitry ny tranokala hisintona boky ara-dalàna maimaim-poana | Ireo mpamaky rehetra
Lisitry ny tranokala hisintomana ebook maimaim-poana
1 Mitady mpamaky amin'ny confinement?
2 Tranonkala tsy mitady tombom-barotra hampidina ebooks
2.1 Ireo tetikasa lehibe
2.2 Tetikasa manokana
2.3 Tranonkala hafa hampidinana ny eBooks
3 Tetikasa ara-barotra izay manana ebook maimaim-poana
4 Toerana handefasana ebook ara-teknika
Mitady mpamaky amin'ny confinement?
Betsaka ny olona manontany antsika hoe iza no mpamaky azo vidiana mba hahafinaritra kokoa ny mihidy. Raha tsy te-handroso hatrany ianao, dia mamporisika ny 2 izahay.
Ilay mpamaky be indrindra eny an-tsena. Momba ilay mpamaky Amazon
Ho an'ireo tia fari-pahaizana sy kalitao
Miaraka amin'ity fanangonana ity dia mikasa ny hanolotra lisitra nohavaozina izahay tranonkala handefasana ebook maimaim-poana sy ara-dalàna. Ny tanjonay dia ny manavao ny lisitra tsindraindray amin'ny alàlan'ny fananganana tranokala vaovao na fanesorana ireo izay tsy miasa intsony. Tsarovy izany ho tetik'asa manolotra atiny ara-dalàna foana izy ireo.
Izahay dia manandrana manasokajy ireo tranokala mba ahazoana aina araka izay azo atao ny fampiasana azy ireo. Ao anaty fononteny dia asehontsika ireo fiteny ao amin'ireo ebooks izay azonao jerena amin'ny sehatra tsirairay. (ES) Espaniola, (EN) Anglisy sy (AOKA) Amin'ny Espaniôla sy Anglisy. Ny vaovao hatramin'ny fanavaozana farany dia miseho miaraka amin'ny fiaviana maitso.
Ny lisitray dia 63 loharano misy boky an-tapitrisany maro amin'ny fiteny rehetra.
Tranonkala tsy mitady tombom-barotra hampidina ebooks
Amin'ity fizarana ity dia hasehontsika ireo tranonkala tsy mitady tombontsoa download books amin'ny karazany rehetra manomboka amin'ny kilasy, ka hatramin'ny sanganasa, amin'ny alàlan'ny tantara an-tsary na boky ho an'ny ankizy.
Ireo tetikasa lehibe
Tetikasa ankapobeny sy sanganasa mahazatra izay eo amin'ny sehatra ho an'ny daholobe. Gutenberg dia misongadina indrindra amin'ny rehetra, satria izy no be mpahalalaka indrindra ary satria manome antsika boky amin'ny .epub sy .mobi.
Tetikasa Gutenberg (AOKA) Classical eo amin'ny kilasika raha ny momba ny tetikasa manome asa tsy misy andriana. Ny tahiry lehibe indrindra an'ny bokim-panjakana eto amin'izao tontolo izao.
Archive.org (AOKA) Arsiva iray hafa an-tapitrisany amin'ny boky nomerika ho an'ny daholobe. Manolotra pdf.
- Ny tranomboky misokatra (AOKA) Tetikasa Internet Archive izay mikendry ny hamorona pejy web ho an'ny boky rehetra misy. Na dia tsy mamela ny fisintomana avy amin'ny takelaka na pejin'ireo boky aza izy io dia mifandray amin'i Gutenberg, Archive na loharano ahazoana azy io raha eo amin'ny sehatra ho an'ny daholobe.
Wikisource amin'ny teny espaniola ary raha mila boky amin'ny fiteny hafa ianao wikisource. Izy io dia famakiam-boky an-tserasera misy lahatsoratra tany am-boalohany na eo ambanin'ny fahazoan-dàlana .GFDL dia tetik'asa Wikimedia mamela ny hisintomana amin'ny pdf.
Wikibooks (ES) Tetikasa Wikimedia iray hafa izay mikendry ny hametraka boky, boky torolalana, lesona fampianarana na lahatsoratra fanabeazana hafa miaraka amin'ny atiny malalaka sy fidirana maimaimpoana ho an'ny rehetra.
iBiblio (EN) Trano fitehirizam-boky sy tahiry niomerika.
Tranomboky nomerika Hispanika (ES) Varavarana maimaim-poana sy maimaim-poana amin'ny boky nomerika ao amin'ny tranombokim-pirenena.
Tranonkala virtoaly Miguel de Cervantes (ES) Izy io dia fanangonana virtoaly ireo sanganasa klasika amin'ny fiteny Hispanika.
Tambajotran'ny tranombokin'i Seville (ES) Katalaogy niomerika an'ny tambajotran-tsoratry ny tranombokin'i Seville.
Europeana (AOKA) Io no fidirana amin'ireo loharanom-baovao nomerika an'arivony any Eropa.
University of Adelaide (EN) Tranon-tserasera amin'ny oniversiten'i Adelaide any Aostralia, mamela antsika hamaky an-tserasera, na hisintona ireo sanganasa amin'ny endrika maro samihafa.
Tetikasa kely tsy mitady tombontsoa.
Gisa sy horita (ES) Iray amin'ireo hetsika tsy mitady tombom-barotra manana kalitao avo indrindra amin'ny fanontana azy. Ganso y Pulpo dia tetik'asa famoahana tsy miankina tsy miankina mitady hamoaka indray ny lahatsoratra sarotra idirana na hadino ary efa afaka zon'olombelona.
Tales ho an'i Algernon (ES) Hetsika tena tsara izay mamoaka nofinofy, forian-tsarin'ny siansa ary tantara mampihorohoro amin'ny teny Espaniôla. Tetikasa manokana tsy mitady tombontsoa manokana izay mitondra antsika tantara avy amin'ny mpanoratra ambony izay tsy navoaka tamin'ny Espaniôla mihitsy. Mpandresy ny Ignotus 2013, raha tianao ny foronina amin'ny siansa dia ilaina izany.
Editions Cruciform (ES) Trano famoahana tsy miankina tsy miankina mitady tombom-barotra, mpandresy ny Ignotus tamin'ny 2013, manolotra ebook maimaim-poana miaraka amin'ny hafa manana fanontana voafetra izay vita indray lasa sehatra ho an'ny daholobe.
Book Camping (ES) Voafaritra ho tranomboky nomerika iraisana izy ireo. Izy ireo dia natokana amin'ny fampifandraisana ireo sanganasa miaraka amin'ny fahazoan-dàlana misokatra. Mampifandray betsaka amin'ny loharano amin'ny resaka politika, sosialy ary fifandraisana.
qomun (AOKA) Sehatra lahatahiry sy kolontsaina mizara maimaimpoana.
Boky 1 1 € (ES) Ny tetikasa tokana amin'ny lisitra iray manontolo izay tsy manome boky maimaim-poana, saingy mendrika izany ny antony. Ho takalon'ny fanomezana amin'ny Save the Children dia azonao atao ny misintona ny boky rehetra tadiavinao, na dia milaza aza izy ireo fa mandoa € 1 isaky ny boky ianao hanampiana ireo ankizy.
Boky nomerika (ES / EN / FR) Fanambarana ireo sanganasa nataon'i Ignacio Fernández Galván.
Tranonkala hafa hampidinana ny eBooks
Amin'ity fizarana ity dia mahita loharanom-pahalalana manome boky ebook momba ny lohahevitra manokana izahay.
Ny Mozean'ny kanto Metropolitan (EN) Ny Metropolitan Museum of Art any New York dia manolotra boky sy gazety marobe amin'ny endrika PDF izay manodidina ny tontolon'ny zavakanto.
Museum momba ny tantara an-tsary niomerika (EN) Fanangonana tantara an-tsary mahazatra avy amin'ny vanim-potoana volamena miaraka amin'ny sary an-tsehatra 15.000 ho an'ny daholobe misintona maimaim-poana.
Tranombokin'ny teknolojia fanabeazana an-tserasera (ES) Izy io dia fitambaran'ny boky nomerika sy magazine amin'ny PDF nataon'i Profesora Diego F. Craig, manodidina ny sehatry ny haitao fanabeazana, ary antontan-taratasy rehetra eo amin'ny sehatry ny daholobe na miaraka amin'ny fahazoan-dàlana mamela azy ireo hizara.
Boe - Ny lalàna (ES) Ny fanangonana ireo fitsipika lehibe manan-kery eo amin'ny rafitra ara-dalàna dia havaozina tsy tapaka ary amin'ny endrika pfd sy epub. Asehon'ny sampan'ny lalàna izy ireo.
Tetikasa ara-barotra izay manana ebook maimaim-poana
Momba izany tetik'asa mifantoka amin'ny varotra manome boky maimaim-poana. Eto isika dia mahita orinasa lehibe toa an'i Amazon, Google na ny trano boky, mpanonta kely manolotra ebook maimaim-poana sy tranokala hafa ary motera fikarohana izay miorina amin'ny tetikasa toa an'i Gutenberg.
Amazon Kindle (AOKA) Ny ebook goavam-be dia manolotra ebook maimaim-poana amin'ny fiteny rehetra.
- Public Domain amin'ny Amazon (AOKA) Mikaroha boky avy any Amazon miaraka amin'ny lisansa Domain Public.
- Sifter boky maimaim-poana (AOKA) Ny motera fikarohana miorina amin'ny boky Amazon mba hahamora amintsika ny fihazana boky maimaimpoana ho an'ny Kindle misy antsika, misy ny boky amin'ny teny Espaniôla na dia ny boky anglisy indrindra aza no betsaka indrindra.
- Zero zato (ES) Masinina fikarohana hafa miorina amin'ny Amazon. Mampiseho boky amintsika amin'ny teny espaniola izy.
- Freebooksy (EN) Ity tetik'asa ity dia mifototra amin'ny fanolorana boky maimaim-poana avy any Amazon, Barnes and Nobles ary Kobo ary manolotra azy ireo amintsika amin'ny endrika bilaogy.
Tranon'ilay boky (AOKA) Iray amin'ireo fivarotam-boky lehibe any Espana, ny katalaogim-bokatra midadasika misy asa maimaim-poana na aotra.
Google Books (AOKA) Izy io dia miasa ho toy ny index an'ny boky izay ahafahantsika mahita boky be dia be azo vakina amin'ny Internet na dia tsy misintona aza.
Play Store (AOKA) Ny fivarotana an-tserasera Google, ahafahantsika mahita boky maimaimpoana maro hamakiana avy amin'ny Smartphone na Tabletinay.
Sehatra ho an'ny daholobe (ES) Tetikasa mitovy amin'ny lahatahiry izay izy ireo no tompon'andraikitra amin'ny fanaparitahana sy fanangonana asa izay lasa sehatra ho an'ny daholobe.
fitehirizam-boky (ES) Initiative izay ahafahanao misintona ebook maimaimpoana ary mandoa rehefa avy namaky azy ireo izay heverinao ho ara-dalàna, fomba vaovao fanaovana asa-vola. Mila fisoratana anarana.
Boky virtoaly (ES) Portal izay ahitan'ireo mpanoratra kilasika miaraka amina sanganasa ho an'ny daholobe manoratra mpanoratra vaovao izay mampakatra ny sangan'izy ireo mba haparitaka.
Mpamaky BQ (ES) Fisafidianana kilasika izay ametrahan'ny orinasa BQ ny bokin'ireo mpamaky azy. Avelany zahay hisintona rakitra zip.
fitehirizam-boky (AOKA) Portal izay manome ebook be dia be.
Feedbooks (ES) Trano famakiam-boky elektronika izay manolotra antsika sanganasa sanganasa amin'ny sehatra ho an'ny daholobe.
Manybooks (EN) Tetikasa izay misarika ny tetikasa Gutenbeberg sy Genome dia misy audiobooks.
eBooksgo (EN) Lisitry ny boky any Gutenberg.
Boky Planet(ES) Manolotra boky ho an'ny daholobe.
Misokatra ny bokin'ny Kolontsaina misokatra (EN) Tanisao miaraka amin'ny boky 700 mahery ho an'ny fitaovana isan-karazany, ereaders, iphone, iphds, finday avo lenta, sns.
Fanontana Dyskolo (ES) Ny famoahan-dahatsoratra izay misy ny sanganasa rehetra avoakany dia manana lisansa Creative Commons
bubok (ES) Ny sehatra fanontana amin'ny birao lehibe dia manana boky maimaim-poana.
Tandindona 24 (ES) Sehatra famakiana an-tserasera io, tahan'ny fisaka hamakiana boky an-tserasera, saingy mamela antsika hanana boky hafa hamaky azy ireo maimaim-poana.
kobo (EN) Ilay goavambe Kobo, dia manana ebook maimaim-poana ao amin'ny katalaoginy toa an'i Amazon.
Barnes & Noble (EN / ES) Ny fahatelo amin'ny ady hevitra miaraka amin'i Kobo sy Amazon, dia manana horonantsary maimaim-poana halefa.
Smashwords (EN / ES) Mpizara boky Indie, miaraka amina ebook maimaim-poana.
Ebook mall (EN) Ebook nomerika ho an'ny mpamaky, iphone, finday avo lenta, takelaka, ipad, pc ary mac
Sportula (ES) Mpanonta Genre izay mankafy anay amin'ny asany sasantsasany maimaimpoana
Lektu (ES) ilay sehatra ara-kolontsaina espaniola lehibe, izay ahitantsika ebooks, audiobooks ary podcast raha toa ka voaloa, maimaimpoana, miaraka amin'ny fampidinana amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola sosialy na amin'ny fomba fandoavam-bola raha tianao.
Boky (ES) Mihoatra ny 10.000 ny boky azo alaina. Na dia maimaim-poana aza izany dia mila misoratra anarana amin'ny Internet isika mba hisintonana azy ireo.
Mpanety nofy (ES) Ity mpamoaka lahatsoratra iray mifantoka amin'ny essay ity dia mampifantoka ny orinasany amin'ny fivarotana boky taratasy fa mamela antsika asa maromaro eo ambanin'ny lisansa Creative Commons ( CC BY-NC , CC BY-NC-SA , CC BY-NC-ND )
Boky amin'ny findaiko (EN) Namboarina ny ebook mba hamakiana azy ireo amin'ny telefaona na fitaovana izay nametraka Java
Ebook Junkie (EN) Sehatra ho an'ny mpanoratra vaovao sy mahaleo tena
Bibliotastic (EN) Mpamoaka mpanoratra tsy miankina iray hafa
Toerana handefasana ebook ara-teknika
Tranonkala manokana manolotra boky ara-teknika sy siantifika maimaimpoana sy ara-dalàna.
Sokafy Libra (AOKA) Ny tranomboky ebook momba ny teknika an-tserasera. Tsy misy isalasalana, tetikasa iray tena mahaliana izay manangona sy manolotra anay boky ara-teknika sy maimaim-poana amin'ny ebook. Vonona ny misintona.
Microofot Technet (EN) Mamela antsika ebook momba ny teknolojia sy rindrambaiko maimaimpoana i Microsoft mba hampidina amin'ny endrika pdf na hamaky an-tserasera.
Ebooks NASA (EN) Boky teknolojia NASA momba ny lohahevitra momba ny fiaramanidina. Tena mahaliana.
Boky CSIC (ES) Famoahana maimaimpoana marobe avy amin'ny High Council for Scientific Research. Manohina ny sampan'ny siansa rehetra.
Ao amin'ny Tech (EN) Katalaogy mahaliana indrindra amin'ny lohahevitra ara-teknolojia sy ara-tsiansa izay miasa miaraka amin'ny Open Access.
Boky teknolojia maimaim-poana (EN) Boky injeniera maimaim-poana sy tsy misy mpanjaka ary boky.
O'Really OpenBooks (EN) Ny trano famoahana O'Really dia mamela antsika hanana ny Open Book. Tsy azo sintonina izy ireo, fa azo vakiana amin'ny Internet, loharano tena mahaliana.
Boky Fandaharana maimaim-poana (EN) Angamba ny lisitra tsara indrindra hitako, fanangonana mahafinaritra sy mahery setra, notazomina tamin'ny alàlan'ny Github. Miaraka amin'ity rohy ity, ny sisa amin'ireo rohy ara-teknika dia saika mijanona tsy misy dikany. Ho fanampin'ny Github dia hitantsika ao izy io reSRC amin'ny endrika tranonkala sariaka kokoa
Boky Fandaharana an-tserasera (EN) Ny fampifangaroana ny sanganasa amin'ny fandaharana, siansa informatika, injenieran'ny rindrambaiko, fampivelarana tranokala, fampiroboroboana rindrambaiko, tahiry, tambajotra, sns.
Ary izao no izy 🙂
Amin'izao fotoana izao tsy nanampy izahay mpanonta boky manolotra boky maimaim-poana nefa tsy mamela azy ireo ho mora sivana na hokarohina, fa mieritreritra ny hampiditra azy ireo amin'ilay lisitra izahay satria azo antoka fa maro ny olona liana.
Raha fantatrao ny habaka bebe kokoa misy atiny maimaimpoana sy ara-dalàna izay tsy nampidirinay, azafady ampahafantaro anay ary hanampy azy ireo amin'ny lisitry ny pejy handefasana ebook maimaim-poana amin'ny Internet.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Software » eBooks » Lisitry ny tranokala hisintomana ebook maimaim-poana
Boris Da Silva Perez dia hoy izy:
Misaotra betsaka, ary arahabaina ao amin'ny bilaogy, manaraka anao isan'andro aho! Asa tsara!
Valiny tamin'i Boris Da Silva Pérez
Misaotra anao namaky anay 🙂 Miarahaba anao
TSY MISY PEREZ SAN JUAN dia hoy izy:
Misaotra betsaka noho ny fanomezam-pahalalana momba ny kolontsaina rehetra, misaotra betsaka.
Valio amin'i NIEVES PEREZ SAN JUAN
Enilda. dia hoy izy:
Nahazo ny mailaka aho. Azafady mba lazao amiko hoe ahoana no hataoko mitady, misintona eboks? Misaotra
Mamaly an'i Enilda.
Salama Enilda, nahazo mailaka ianao izay efa nampandrenesina hafatra tsy miankina iray tao amin'ny forum misy hetsika vaovao izay mbola ampanaovinay ihany saingy mbola tsy vonona izany. https://www.todoereaders.com/foros/showthread.php?t=794
bookblog dia hoy izy:
Endrey, tsara, Nacho, ny fizaranao ireo tranokala ara-kolontsaina ireo.
Manana bilaogy fampidinana boky aho (avaozina ny Zo rehetra), manetry tena kokoa noho ireo navoakanao, eny. Eto aho no mizara azy: Epub sy PDF maimaim-poana, raha misy olona te-hitsidika anay 🙂
Misaotra betsaka tamin'ity fanangonana lehibe ity, izay heveriko fa mety ho elaela vao nivory sy nandamina.
Mamaly an'i tublogdelibros
Salama, misaotra betsaka amin'ny sosokevitra, hodinihiko ny tetikasanao ary raha mahafeno ny fepetra amin'ny fanavaozana manaraka ny lisitra izay hataoko afaka andro vitsivitsy dia hanampy azy aho.
Eny, Nacho, misaotra betsaka! Manantena aho fa mahafeno ny fepetra takiana.
Ny 23 aprily dia daty iray tena manokana manerantany miaraka amin'ny fahatsiarovana ny "Andro Iraisam-pirenena ho an'ny boky" sy ny "Zon'ny mpanoratra", amin'ity rohy manaraka ity dia avelako hanangona boky 40 momba ny marketing ety anaty Internet 2014:
alexarriete dia hoy izy:
Amin'ity rohy ity dia ahitanao hoe rehefa misy boky afaka amin'ny Amazon.
Valio amin'i alexarriete
goitia dia hoy izy:
Tsara ny tolak'andro, nividy boky bq cervantes e aho, saingy marihiko fa saika ny boky rehetra dia ho dorana ... tsy azoko atao ny misintona azy ireo ao amin'ny bq (mamela ny tsy fahalalako, vaovao aho amin'ity)
Mamaly an'i goitia
Ry namako tsara, raha mitranga izany matetika dia mirehitra ny fandrehitra ireo boky. Raha tianao dia tsidiho ity pejy ity dia hahita endrika maro ianao ankoatry ny fanananao titre mihoatra ny 30. http://www.megaepub.com/
salama fa maninona ianao no tsy manandrana misintona epub maimaim-poana amin'ity pejy ity [namboarina] manana boky amin'ny endriny rehetra izy!
Salama Milagros. Ny tranokala misy alaina ara-dalàna ihany no resahanay.
Manao ahoana ianao? Fantatrao ve ny sehatra ahafahanao mampakatra epubs, ary aseho azy ireo ho toy ny talantalana virtoaly? Raha lazaina amin'ny teny hafa, talantalana virtoaly misy ireo bokinao manokana ao anaty rahona. Misaotra anao!!
Salama Darío, amin'izao dia tsy misy fantatro na dia azoko antoka aza fa hisy zavatra. Safidy tsara dia ny fametrahana ny tranombokinao amin'ny manager Caliber amin'ny dropbox, kopia, drive na ny mitovy aminy. Ka manana ny bokinao amin'ny Internet foana ianao.
Nacho, misaotra tamin'ny valiny. Fa ny tadiaviko dia tsy ny famonjena azy ireo ao anaty rahona ihany, fa ny fahitana ny fonony sy ny anaran'ny tsirairay, hahafahany misafidy azy ireo. Raha niditra ny rahona tamin'ny takelaka nataoko aho dia ny anaran'ny fisie ihany no ho hitako fa tsy ny fonony. Ary sintomy izy ireo raha ilaina. Raha mahita zavatra ianao dia ampahafantaro ahy! Misaotra anao!
mitaiza kely dia hoy izy:
Salama, ilaiko ilay boky "The English Cemetery" nataon'i JM Mediola, azonao atao ve ny milaza amiko ny fomba hahazoako azy. Misaotra anao.
Salama. Manasa anao hihaona amin'i Ablik aho ( http://ablik.com). Ireo ebook dia azo alaina na vakiana mivantana eo amin'ny efijery amin'ny fitaovana rehetra. Izy ireo dia sanganasa literatiora tsy misy zon'ny mpamorona, na asa tany am-boalohany, izay ara-dalàna tanteraka. Azo navoaka koa izy io. Mirary ny soa indrindra!
laviniacor dia hoy izy:
Geez, efa antitra aho ary "misambotra ny hadisoan'ireto zavatra ireto", amin'ny maha olom-baovao ahy tanteraka, dia lasa (na mahatsapa ho ...) ... "manam-pahaizana" aho, ary misaotra anao ary lahatsoratra marobe ao amin'ny «todoreaders.com»! MISAOTRA ANAO !
Mamaly an'i laviniacor
Compilation tsara indrindra Nacho! Ankoatr'i Amazon miaraka amin'ny Audible, tranokala hafa inona avy no atoroinao hihainoana boky audio?
Valiny tamin'i Lucía García
Tsara ny tolakandro, lahatsoratra mahaliana ho an'ireo tia mamaky.
Ho an'ireo rehetra liana amin'ny fahazoana $ 0,00 Kindle boky amin'ny bilaogy, fandraharahana, orinasa an-tserasera, fampandrosoana manokana, fidiram-bola na vola manokana, afaka manampy anao aho.
Valiny tamin'i Arnaldo
Nividy BQ Cervantes 3 tany Madrid aho. Saingy mipetraka any Arzantina aho ary gaga fa tsy afaka mividy boky amin'ny Store na boky hafa ao amin'ny fireneko satria ny rafitra NUBICO dia tsy manaiky, ohatra, ny carte de crédit any Arzantina, zavatra tsy hitranga amin'ny firenen-kafa eo amin'izao tontolo izao izay ividianako.
Manana fomba hafa hividianana ve aho sa nandany ny vola?
Nividy BA Cervantes 3 tamin'ny diako farany tany Madrid aho
Satria tsy mandray carte de crédit avy amin'ny fireneko ny magazay Nubico, dia tsy afaka nividy boky aho. Ary miresaka hividy aho fa tsy misintona ebook maimaim-poana.
Azoko atao ve ny milaza amiko amin'ny fivarotana na mpamatsy ebooks azoko vidina avy any Arzantina?
Salama Goodnight. Azonao atao ny manolotra mpamaky 10 ″. Liana amin'ity endrika ity aho hamaky boky ara-teknika amin'ny endrika pdf. Manana mpamaky boky roa hafa aho (Papyre sy Bq Cervantes) saingy amin'ireo dia tsy misy fomba hamakiana pdfs. Rahoviana ny mpamaky 12 ″ vonona sy mora azo? Mirary ny soa indrindra
Manoro hevitra anao aho hijery ny tetikasa Ebrolis, ny tranokalany dia http://www.ebrolis.com
Salama, averinay jerena izany ary raha mifanaraka amin'ny fepetra dia ampianay amin'ny fanavaozana manaraka ny lahatsoratra ity.
Misaotra betsaka 🙂
Abi dia hoy izy:
Salama te hahafantatra momba ny «Unbox» hisintona avy hatrany ireo boky nomerika mifandraika amin'ny fahasalamana manokana momba ny onkolojia sy ny fitsaboana nify, ireo boky izay tsy misy eto amin'ny fireneko pirinty. Mila tolo-kevitra avy amin'io pejy io aho izay amin'ny toerana maro no mitarika ahy amin'ity pejy ity.
Mamaly an'i abi
Luis Diego dia hoy izy:
Manoro hevitra an'ity taona 2020 ity aho mba hahafahanao misintona boky manao izany avy amin'ny bookpdfgratismundo.xyz dia nanavao ebook be dia be izy ireo
Valiny tamin'i Diego Diego